Azụmaahịa: Otu Pịa Pịa Ndebanye aha Omume | Blog MarTech
N'elu na arụpụta ize ụlọ ọrụ m na-agba ọsọ, anyị na-eme ọtụtụ nzukọ ọmụmụ ọha. Anyị na-eme ọkọlọtọ omume ahịa stof: anyị nwere microsite, anyị enwetala akwụkwọ ozi email, anyị enwetala ya online ndebanye usoro. Ma anyị nwere otu echiche anyị na-eche maka ịnwale, ọ dịkwa ntakịrị. Ma eleghị anya, i nwere ike inyere na-agwa anyị ma ọ bụrụ na nke a bụ ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ echiche: anyị na-akpọ ya "otu-pịa ndebanye."
Lee echiche. Banyela maka akwụkwọ ozi email, nke nwere ozi gbasara mmemme na-abịa. Mgbe ịpịrị bọtịnụ ahụ, anyị ozugbo chee na ị debanyere aha maka ihe omume ahụ. Kwesighi imeju akwụkwọ. Anyị ga-eji njikọ pụrụ iche na akwụkwọ ozi email iji chọpụta onye ị bụ ma soro usoro ahụ. Lelee mockup n'okpuru:
O yiri ka ọ dị mma, mana enwere ụfọdụ nsogbu anyị na-eche. Ọmụmaatụ:
Gịnị ka “e debara aha ya n’otu ntabi anya” pụtara?
Omume ahia na-adabere na ndị mmadụ na-egosipụta n'ezie. Ya mere, ịpị bọtịnụ ahụ nwere ike ibuga gị na ibe weebụ ebe ị nwere ike itinye na nkọwa gị ndị ọzọ. Ma ọ bụ ọ nwere ike iburu gị gaa na peeji nke etiti nke na-agwa anyị na ị dị njikere ịdebanye aha, yabụ anyị nwere ike ịgbaso ma ọ bụrụ na i mezughị usoro ndebanye aha ndị ọzọ.
Gịnị banyere ego pụrụ iche?
Anyị enyeworị ndị na-edebanye aha ha n'akwụkwọ ọnụego pụrụ iche. Bọtịnụ "Debanye M" nwekwara ike itinye ego ahụ na ibe ndebanye aha. Nke ahụ mara mma nke ọma, mana anyị chọrọ ịme azụmahịa pụrụ iche karịa nke ọma na ebumnuche?
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ezigara onye ọzọ ozi email ahụ?
Nke a bụ nnukwu ihe nkwụnye. Ọ bụrụ na i zigara enyi gị ozi email, yana ha pịa bọtịnụ “Debanye aha M”, ha ga-abanye gị aka maka mmemme ahụ. N'ezie, anyị nwere ike ịjụ ha ka ha kwenye na aha ha bụ "Bob Smith", mana nke ahụ ọ na-eme ka ọ sie ike na nkịtị?
Anyị ekwesịrị ịnye ma "Enwere m mmasị" na njikọ "Banye M Ugbu a"?
Akwụkwọ ozi email dị ugbu a nwere njikọ "Ozi agbakwunyere", nke ị nwere ike pịa iji hụ ọnụahịa na nkọwapụta mmemme. Enweghị nsogbu dị na ịpị njikọ ahụ. Mana bọtịnụ "Debanye aha m" na-egosi na ị na-eme nkwa. Nke ahụ ọ bụ ezigbo echiche ma ọ bụ echiche ọjọọ?
Yabụ, gịnị ka ị chere? Anyị ga-enwe mmasị na nzaghachi gị na echiche ahia ọhụụ a: anyị kwesịrị ime ya?
(Ma ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya, nweere onwe gị ịnwale ya n'onwe gị ma mee ka anyị mara etu o si aga!)
Email Marketing Advanced Practices Akwụkwọ Nkọwa
Echere m na ịpị bọtịnụ ahụ kwesịrị ijupụta Ama ha na ntanetị nhọrọ ịhọrọ ihe omume gị. N'ụzọ dị otú ahụ ị na-eme ka usoro ahụ nwee ike ịmị mkpụrụ na ntinye ntinye dị mfe. Ga-enweta uru agbakwunyere nke onye ebugharị na-enwe ike ịgbanwe aha ha site na mbido
Nke ahụ bụ isi ihe anyị na-atụ aro, yabụ na ọ dị ka anyị nọ n'otu ibe. Daalụ!
Mba abụọ bọtịnụ. Bọtịnụ “Debanye M na” ga-egosi na m ga-edebanye aha ma ọ bụrụ na m pịa ya (ọ bụ ezie, n’ezie, m ga-atụ anya idejupụta akwụkwọ mbụ) na bọtịnụ “Enwere M Mmasị” ga-egosi na m chọrọ ka ị kpọtụrụ m karịa banyere ya, nke m chere na ọ bụ ụzọ ziri ezi m ga-esi. Bọtịnụ “Enwere m mmasị” dị ka ihe na-adịghị mkpa n'akụkụ otu bọtịnụ "Banye M".
Enwere m mmasị n'echiche ịpị bọtịnụ na ozi-e nke na-akpọga m na peeji nke ozi m bipụtara, gụnyere ọnụahịa mbelata. Ee, a ga m eme ka mbelata ego di na peeji ndebanye aha - Achọrọ m ịmara na m na-enweta azụmahịa. Mgbe ahụ, ihe m ga - eme bụ ịgbakwunye ozi ịkwụ ụgwọ iji debanye aha, peasy dị mfe. A na-elu-echetara m ịga ihe omume ga-abụ kwa obtrusive, ma ọ bụrụ na m na-akwụ ụgwọ na-aga mgbe ahụ, m eleghị anya, agaghị m echefu.
Ọ bụrụ na m zipu akwụkwọ akụkọ ahụ na onye nnata pịa bọtịnụ ahụ, mgbe ahụ ha ga-ejupụta nke ha ozi - ọ bụghị nnukwu nsogbu. Ha ka ga-abanye ozi ịkwụ ụgwọ ha ka m wee ghara ichegbu onwe ha na ha ga-edebanye aha m maka ihe megidere uche m. Ajuju m ajuju diri gi, i choro ka ha nwekwa onu ahia dika onye natara akwukwo ala? N'ihi na ọ bụ otu a ka usoro a ga-esi rụọ ọrụ (belụsọ na ịnwere mmemme ndị ọzọ iji jikọta ego na aha ma ọ bụghị njikọ ya).
Re: na-enweta nkọwa ndị ọzọ na-enweghị ịdenye, M na-atụ aro na-ejikọ aha nke ihe omume ya metụtara web peeji nke. Echere m na ọ bụ ihe omimi zuru oke maka ndị mmadụ pịa aha iji chọpụta ihe ndị ọzọ.
Oh, ọ masịrị m! Mee ka ihe omume a jikọọ njikọ, ma gbakwunye bọtịnụ maka ndekọ ozugbo.
(Anyị emeworị ihe ncheta ndị a na-esote, mana kama ịme ha na-akpaghị aka, anyị na-edekarị ozi-e na-akpọ oku. Nke a na-abawanye onye gosipụtara.)
Echere m na ọ dị mma maka ndị na-edebanye aha ha iji ego ego ala. N'okwu ahụ, anyị ga - atụ aro na ikekwe ịga n'ihu ma debanye aha maka akwụkwọ akụkọ ahụ. 🙂
Echiche ahụ masịrị m. Dị ka ndị ọzọ kwuru, m ga-ahụ na enwere nhọrọ maka ịdebanye aha onye ọzọ, kwuo ma ọ bụrụ na onye nchịkwa chọrọ ịdebanye aha onye isi ya maka ihe omume. Nke a yiri otu Amazon.com si eme otu usoro ịzụrụ ha. Ma eleghị anya, were ụfọdụ nkọwa ha wee tinye bọtịnụ 'otu-pịa-ntinye aka' kama?
M na-eme a otutu ihe omume ahá »‹ a na-ahá »love n'anya echiche nke ozugbo banye. Na njedebe azụ, m ga-edebanye aha onye ahụ na camapa ntapu nke na-amalite site na email nkwenye. N'ụzọ ahụ ma ọ bụrụ na enyi m edebanye aha m site na ozi m, enwere m ike ịgafe ya.
Echiche dị egwu, Lorraine!
Yabụ na ọbụghị naanị otu ntinye ihe ndebanye aha a, kamakwa ụzọ ọzọ maka mkpọsa ntapụ.
Nov 23, 2011 na 12:29 AM
Nọrọ Sourced, onye nkwado ngwaahịa na-ebubata ngwa ahịa, ewepụtala ọtụtụ ngwaahịa eco-enyi na enyi nke gosipụtara ụfọdụ ihe dị egwu na ọmarịcha maka ihe eji emegharị emegharị. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-achọ echiche na-atọ ụtọ na nke usoro echiche ire ahịa, enwere ọtụtụ ihe ị ga-aga: mousemats na coasters si recycled taya, achara itienna, yo-yos na pensụl nke nwere ike ịchọta nna nna ha azụ na ịdị umeala n'obi ochie CD ikpe. Ikekwe ngwa kachasị adọrọ mmasị na nchịkọta mmekọrịta ha na gburugburu ebe obibi bụ enweghị batrị, elekere na-enweghị mmiri nke na-akpali ụfọdụ mkparịta ụka na-atọ ụtọ n'etiti ndị otu ebe a. Maka ụyọkọ nwere ọgụgụ isi, nkọwa ụfọdụ na-echegbu onwe anyị maka otu nke a nwere ike isi rụọ ọrụ na ọ nweghị ihe anyị ga-achọ na ngalaba ọha. Ọ bụrụ na e nwere ndị ọkà mmụta sayensị, ndị na-eme nchọpụta ma ọ bụ ndị na-ahụ maka voodoo n'ebe ahụ, ndị nwere ike ịme ka ìhè dị na nke a, biko kwuo okwu ma wepụ anyị na nhụsianya anyị.
Dec 27, 2012 na 7:10 PM
Hụ echiche ahụ n'anya. Dị nnọọ ka ya bụrụ na ọ bụ a-eguzo naanị ngwaahịa ewezuga email ịrịba ama-elu. Ana m eme ihe omume. Enwere m ozi kọntaktị nke ndị m na-akpọ oku. Naanị m chọrọ ka ha pịa njikọ dị na email akpọ “ee” ma ọ bụrụ na ha na-abịa na “mba” ma ọ bụrụ na ha abụghị. Dị ka ọ dị mfe ma enwebeghị m ike ịchọta ngwá ọrụ na-enye ọrụ a. Ọ bụrụ na ị maara nke otu, biko mee ka m mara ka m na-agba mgba ugbu a na Smart Sheets iji chọta ebe a na-arụ ọrụ.
Dec 27, 2012 na 7:15 PM
@LisaDSparks: disqus you lelee anya n'ime ngwaahịa dị ka meetup.com ma ọlị? Amaghị m banyere ozi ịntanetị, mana saịtị ahụ dị mfe dịka nke ahụ… yana ụfọdụ atụmatụ agbakwunyere iji mee ka ị jikwaa obodo gị.
Dec 27, 2012 na 7:18 PM
Nzukọ dị egwu, ọ bụghị maka ihe m na-eme ugbu a. Ga-eji Smart Sheet gaa n'ihu ma nwee olile anya maka ihe kacha mma. Enweghi ike ichota ihe a. Nnukwu azụ ka ị ghee, mana ọ ga-amasị gị ịnweta ịdị mma nke ọrụ a - ee ee, m dị njikere ịkwụ ụgwọ maka ya! Daalụ, Douglas. - L
Great Post… Daalụ maka ide edemede a…